Huteel ay deggan yihiin xildhibaanada baarlamaanka Somaliya oo la weeraray & dhaawacyo soo gaaray. – Radio Daljir
Huteel ay deggan yihiin xildhibaanada baarlamaanka Somaliya oo la weeraray & dhaawacyo soo gaaray.
Diseembar 19, 2009 12:00 b 0
Muqdisho, Dec 19 – Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xalay fiidkii hore lagu weeraray Hoteelkii ay degganaayeen oo ku yaalla magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda X/weyne.
Weerarkaasi oo mid gaadmo isla markaana loo adeegsaday bam gacanta laga tuuray ayaa waxaa ku dhaawacmay labo ka mid ah xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliyeed, kuwaasi oo haatan lagu dabiibayo goobaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho.
Mid ka mid ah xildhibaannada la weeray isla markaana dhaawac fududi soo gaaray oo u warramay idaacadda VOA-da laandeeda afka Soomaaliga ayaa sheegay weerarkaasi in ay gaysteen labo nin oo dhallinyaro ah oo mid sitay bam gacmeedka lagu soo tuuray halka midka kalana uu watay baskoolad rasaas badan uu ka riday kadibna ay basadeen.
Xildhibaankaan oo lagu magacaabo Daahir C/qaadir Muuse ?Cirro?, ayaa sheegay illaalada Hoteelka ay degganaayeen ee Muna, in aysan muujin wax dadaal ah oo ay falkaasi kaga hortagayaan ama ay kaga daba-tagayaan, mana jirin sida xildhibaanku sheegay wax rasaas ah oo illaalada ay rideen.
Dhanka kale xildhibaanku waxaa uu tilmaamay xaaladda ammaan ee xildhibaannada dawladda federaalku in ay tahay mid liidata oo aysan jirin wax illaalo ah oo ay haystaan, markasta halis ugu jiraan weerarada kooxaha dawladda ku kacsani ay ku hayaan mas?uuliyiinta dawladda.
Md. Cirro waxaa uu intaas ku daray in baarlamaanka dawladda oo tiro ahaan aad u badan dhammaantood in aysan lahayn wax illaalo ah marka laga reebo guddoomiyaha golaha wakiillada.
Ma ahan markii ugu horraysay oo weerer noocaan oo kale ah lagu qaado mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, waxaana muddooyinkii ugu danbeeyey sii xoogaysanayey weerarada iyo ugaarsida lagu hayo ma?uuliyiinta ka tirsan dawladda.
?Xildhibaan Afaraale oo ku eedeeyey Puntland tacaddi loo gaystay dadka ka soo barakacay Bay & Bakool.
Tartankii astaynta calanka, heesta iyo summada Puntland oo la soo gunaanaday & kala doorashadii oo bilaabatay.